AHOANA NY FOMBA HANAMBOARANA NY LESOKA FAMPIHARANA 0XC000007B - MALEMY
Ahoana ny fomba hanamboarana ny lesoka fampiharana 0xc000007b
Ahoana ny fomba hanamboarana ny lesoka fampiharana 0xc000007b: 0xc000007b Application Error dia lesoka mahazatra matetika izay mitranga rehefa manandrana mihazakazaka ny sasany Direct X lalao na fampiharana. Ny ankamaroan'ny mpampiasa varavarankely dia miatrika an'io lesoka io matetika fa tsy hainy ny manamboatra azy io maharitra. Raha ny marina dia mety misy antony maro hisehoan'ity hadisoana ity ka tsy misy ny fanitsiana tokana, noho izany dia hiresaka momba ireo fanamboarana samihafa rehetra momba izany isika. Fa alohan'ny handehanana lavitra dia aleo hiresaka momba ny inona fotsiny ity lesoka ity.
Tsy afaka nanomboka tsara ny rindranasa (0xc000007b). Tsindrio OK raha hanidy ny fampiharana.
Inona no dikan'ny hadisoana fampiharana 0xc000007b?
Io kaody hadisoana manokana io dia manondro endrika endrika tsy mety. Na izany aza, ny dikan'ny kaody hadisoana dia ny manandrana mampandeha programa izay kasaina hiasa amin'ny rafitra fiasa Windows bitika 64 ianao, saingy manana OS 32 bit fotsiny ianao. Misy antony roa hafa mety hitrangan'izany koa, indrindra raha fantatrao fa manana rafitra miasa 64-bit ianao na nahavita nitantana ilay programa taloha. Ireto misy dingana famahana olana amin'ny Fix Application Error 0xc000007b.
Fomba 1: Mihazakazaha ny fampiharana amin'ny maha Administrator anao
Fomba 2: Mihazakazaha ny fampiharana amin'ny fomba fampifanarahana
Fomba 3: Atsaharo ny fampiharana
Fomba 4: Fanamarinana ny hadisoana amin'ny kapila mafy
Fomba 5: Avereno ny DirectX
Fomba 6: Mametraka na manamboatra .NET Framework
Fomba 7: soloy xinput1_3.dll 32-bit amin'ny kinova sahaza azy
Fomba 8: Atsaharo ny fonosana runtime rehetra an'ny Microsoft Visual C ++
Alohan'ny hanovana ny rafitra dia alao antoka fa hamorona teboka famerenana amin'ny laoniny, sao sanatria misy tsy mety.
Tsindrio havanana amin'ny rindranasao ary safidio Mihazakazaha ho mpandrindra . Indraindray ny fanomezana tombontsoa ara-pitantanana ny fampiharana dia mety hamaha ity olana ity. Raha toa ka mamaha io olana io ny fanomezana tombontsoa ara-pitantanana dia mety hoheverinao foana ny mihazakazaka miaraka aminy ny fangatahanao.
Mba hanaovana izany, kitiho tsara ny kisary fampiharana ary kitiho eo Properties , safidio ny Fifanarahana kiheba, ary zahao Ataovy toy ny administratera ity programa ity.
Indraindray dia mihazakazaka ny fampiharana amin'ny maody fampifanarahana manamboatra Application Error 0xc000007b satria mety ho azo atao fa tsy mifanaraka amin'ny kinova fikandrana vaovao ny rindranasa. Andao hojerentsika ny fomba hanaovana izany:
1. Tsindrio tsara ny kisary fampiharana ary kitiho eo Fananana.
2.Select ny Fifanarahana kiheba ary kitiho eo Mandehana troubleshooter mifanentana.
3. Ary avy eo mifantina Andramo ireo fanoroana voatondro aorian'izay dia azonao atao ny manandrana ny rindranasao na avy eo mamely manaraka fotsiny.
4. Ary raha tsy nety ho anao ilay voalaza etsy ambony dia azonao atao ny misafidy fomba maodely mifanentana ary avy amin'ny safidinao milatsaka Windows XP.
Esory ny rindranasa ary apetraho indray, fa alohan'izay dia tsy maintsy manaraka an'ity ianao:
1. Atsofohy amin'ny fizarazarana ny rafitra (C :) satria mety hamerina lesoka ny fampiharana raha apetraka amin'ny fizarazarana lozika.
2. Hamarino tsara fa vonoy ny programa antivirus anao alohan'ny fametrahana. [ Fanamarihana : Karohy ny rakitrao alohan'ny hamonoana ny antivirus anao
ny Amboary ny lesoka fampiharana 0xc000007b tokony hizaha tsy tapaka ny kapila mafyo sao misy lesoka. Ny sisa hataonao dia ny manaraka ireto dingana ireto:
1. Kitiho havanana amin'ny bokotra fanombohana ary safidio Command prompt (Admin).
2. Karazana chkdsk c: / f / r ary tsindrio enter.
3. Hanontany anao handahatra ny scan izy satria mampiasa ny C drive, kitiho ny Y handahatra ny scan ary tsindrio enter.
Ary rehefa hamerina ny varavarankely ianao dia hizaha ireo kapila mandritra ny famerenan'ny rafitra ary azo antoka fa Hanamboatra Application Error 0xc000007b.
Mba hisorohana ny lesoka fampiharana 0xc000007b dia tokony ho azonao antoka ny manavao ny DirectX anao. Ny fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa manana ny kinova farany napetraka ianao dia ny misintona ny DirectX Runtime Web Installer avy Tranonkala ofisialin'i Microsoft .
.NET Framework dia mety hiteraka lesoka sy olana maro raha tsy havaozina matetika. Mba hahazoana antoka fa manana ny fitsidihana kinova farany ianao Eto . Raha efa manana ny kinova farany momba ny .NET Framework ianao dia hatolotry ny installer anao hanamboatra .NET Framework amin'ny toetrany voalohany. Raha tsy mahavaha ny lesoka Fampiharana 0xc000007b dia tohizo ny famakiana!
0xc000007b Application Error dia mitranga rehefa ny rakitra xinput1_3.dll dia simba na voasoratra miaraka amina kinova hafa izay sendra tsy mifanaraka. Mba hanoloana ny xinput1_3.dll 32-bit miaraka amina kinova mety dia araho ireto dingana ireto:
1. Sintomy ny 32-bit xinput1_3.dll manaova rakitra ary esory izany.
FANAMARIHANA: Alohan'ny hanaovana na inona na inona dia tokony averinao aloha ny rakitra xinput1_3.dll anao (izay tokony ho hita eto: C: Windows SysWOW64) ary raha misy zavatra tsy mandeha araka ny kasaina hatao dia azonao averina foana izany.
2. Adikao ilay rakitra xinput1_3.dll nalaina avy eo ary mandehana mankany C: Windows SysWOW64 SY apetaho eo ny fisie.
3. Raha voatosika dia alao ny safidy ary soloiho.
Ny fonosana Microsoft Visual C ++ runtime dia ampahany tena ilaina amin'ny fampandehanana ny rindranasa Windows ka noho izany ny famerenana azy ireo dia afaka Manamboatra Application Error 0xc000007b. Ny fonosana Visual C ++ dia samy manana ny kinova 32-bit & 64-bit ary samy manan-danja mitovy izy roa.
Fanamarihana: Alohan'ny hanarahana ireo dingana rehetra voatanisa, tsy maintsy atao ny mamorona teboka famerenana rafitra raha sanatria misy tsy mety dia afaka miverina mora foana amin'ny fanjakana teo aloha ianao. Raha tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany dia vakio ny lahatsoratro teo aloha momba ny fomba famoronana teboka famerenana rafitra.
1. Voalohany, mankanesa any amin'ny tontonana fanaraha-maso ary tsindrio Esory ny programa .
2. Ankehitriny esory tanteraka daholo Fonosana Microsoft Visual C ++ avy amin'ny solosainao. Aorian'izany dia avereno ny PC-nao.
3. Rehefa manomboka indray ny rafitrao dia tsy hisy ireo fonosana ao, mandehana mankany amin'ny pejy fisintomana ofisialin'i Microsoft Eto
4. Ampidino ary apetraho ny tsirairay amin'izy ireo ary raha misy amin'izy ireo tsy mahavita mametraka, tsy miraharaha azy ireo ary mametraka ny manaraka. Hiverina imbetsaka ny solosainao mandritra ny fametrahana azy, ka mahareta.
Ny fomba fanamboarana ny solosainao dia ambany amin'ny fampitandremana fahatsiarovana
Ahoana ny fomba hanamboarana MMC tsy afaka mamorona ilay Snap-in
Ny fomba fanamboarana ny COM Surrogate dia nijanona tsy miasa intsony
Izay no ho azonao mora foana manamboatra Application Error 0xc000007b fa raha mbola manana fanontaniana ianao dia aza misalasala maneho hevitra fa hiverina aminao izahay.
google chrome tsy mitendry audio
autoplay tsy mandeha windows 10
avereno jerena ny windows 10
mandefa ny horonantsary youtube fa tsy afaka milalao
kodiarana mihodina hatrany ny windows 10
iray na maromaro ny singa fanavaozana ny varavarankely dia voalamina tsy mandeha tsara amin'ny Windows 10
touchpad tsy mandeha aorian'ny fanavaozana ny windows
fampiharana sary tsy mandeha Windows 10